७ बर्षिया छोरीको आमालार्इ प्रश्नः हाम्रो बाबा खोई ? आमाको जवाफः म अविवाहित हुँ छाेरी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ७ बर्षिया छोरीको आमालार्इ प्रश्नः हाम्रो बाबा खोई ? आमाको जवाफः म अविवाहित हुँ छाेरी
७ बर्षिया छोरीको आमालार्इ प्रश्नः हाम्रो बाबा खोई ? आमाको जवाफः म अविवाहित हुँ छाेरी
फागुन १० गते, २०७४ - १४:५४
जब उनी पाँच वर्षकी भइन्, उनले एक दिन सोधिन्– ‘आमा, मलाई के भन्नुभएको थियो भने जब केटाकेटी ठूला हुन्छन्, विवाह गर्छन् र उनीहरूका छोराछोरी हुन्छन् । मेरी आमाको पनि कसैसँग विवाह भयो होला । जब मलाई जन्म दिने आमाका बारेमा थाह छैन भने त्यसरी नै जन्म दिने बुबाको बारेमा पनि केही थाह छैन । तर यो नभन्नुहोस् कि मेरो बुबा छैन ।’ म रोएँ । त्यो दिन मलाई थाह भयो, उसको प्रश्नमा मेरो प्रतिक्रियाले उसले के सोचि होलिन् । उनका लागि यो एक सजिलो तर्क थियो । पाँच वर्षकी एउटी बच्चीले आफ्नो प्रश्नको उत्तर खोजिन् ।
मेरी छोरी मेरो जीवनको अहम् हिस्सा बनिसकिन् । अब म बच्चा अपनाउने प्रक्रियाको बारेमा आमाबुबालाई सल्लाह दिन्छु । मेरी छोरी स्कुल जान मन पराउँदिनन्, यसकारण मैले उसको स्कुलको शिक्षा घरमा नै सुरु गरेकी छु । म उसलाई स्वयम् निर्णय लिनमा सहयोग गर्छु । मेरो बाल्यकालमा यस्तो मिलेन, जसका लागि धेरै महत्व छ । जब उनले स्कुल जान चाहन्छु भनेर मलाई भन्ने छिन, म उसलाई लिएर जानेछु । यो उसको आफ्नो पहिचान हो, जुन कुराले उसलाई कुशल बनाउने छ । जस्तो म छु । म एक्लो छुइन, म केवल एक्लै बस्न चाहन्छु । तर मेरी छोरीसँग हुँदा म सबैभन्दा बढी खुशी हुन्छु । बीबीसी
४० बर्षदेखि सँगै बस्ने एक समलिङ्गी जोडीको रोचक कहानीः अनि महिलासँगै जीवन बिताउने निधो गरेँ
फागुन १० गते, २०७४ - १४:५४ मा प्रकाशित